Ururka Haweenka Qaranka oo baaq u diray duubabka dhaqanka Hiiraan iyo SH/Dhexe “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Ururka Haweenka Qaranka ayaa casho sharaf u sameeyey duubabka dhaqanka Gobolada Hiiraan iyo SHabeelaha Dhexe, waxaana dhextaal u aheyd ka hadalka dhameestirka shirka Maamul u sameynta labada gobol, waxaana ka qeyb galay Guddoomiyaha Gobolka Shabeelaha Dhexe Cali Xuseen Guudlaawe.
Haweenka ayaa sidookale hadiyado Guddoonisiyay duubabka dhaqanka si ay ugu dhiira geliyaan howsha adag ay labada gobol u hayaan.
Guddoomiyaha Ururka Haweenka Qaranka Batuulo Sheekh Axmed Gaballe ayaa ka codsatay duubabka dhaqanka ee labada gobol inay dadajiyaan dhismaha Maamulka Hiiran iyo Shabeelaha Dhexe.
Duubabka Dhaqanka ayaa uga mahad celiyay Ururka Haweenka casha sharafta ay u sameeyeen dhaqanka, waxaana ay sheegeen inay isku raaceen inta badan habkii wax ay u qeybsan lahaayeen maamulka, isla markaana dhawaan lagu dhawaaqayo, loona gudbayo wejiga ugu dambeeyo ee dhismaha Dowlad Goboleedka Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe.
Guddoomiyaha Gobolka Shabeelaha Dhexe Cali Cabdulaahi Xuseen Guudlaawe oo ka hadlay munaasabda ayaa sheegay in Haweenku ay yihiin lafdhabarta bulshada, loona baahanyahay in boqolkiiba sodon laga siiyo maamul goboleedka la dhisayo.
“Haweenku wya dowladnimo jecelyihiin, markii gobolkaan la ii soo magacaabay Haweenka ayaa i soo dhaweeyay, waxaan rabnaa Haweenku waxa ay doonayaan in la siiyo 30% ugu yaraan waana hubaa inay mudanyihiin Dowlad Goboleedka la dhisayo mid tusaale fiican u noqda xaquuqda Haweenka ha noqdo” ayuu yiri Guddoomiyaha Gobolka Shabeelaha dhexe Cali Guudlaawe
W/D: Cabdishakuur Cali Axmed Jowhar
Guddoomiye Guudlaawe: “Haraadiga Al-Shabaab waa laga ciribtiraya guud ahaan Gobolka”